11 matsva maficha eIOS 11 asina kutaurwa naApple muKeynote | IPhone nhau
11 matsva maficha eIOS 11 ayo Apple asina kutaura nezvaKeynote
Nezuro hurukuro yakakosha yaive imwe yeakakwana kwazvo mumakore apfuura, yakakosha iyo Apple yakaratidza zvinyorwa zvitsva zveIOS 11, watchOS 4, tvOS 11 uye macOS High Sierra, pamwe nekuvandudzwa kweMacBook Pro uye iMac renji, pamusoro pekuburitsa iMac Pro uye HomePod. Asi pamusoro pezvo, yakavandudza zvakare MacBook Air uye iyo 12,9-inch iPad Pro, ichichipa iwo akafanana akafanana nehama yake mudiki, iyo 10,5-inch iPadPro, iyo yakaburitswa pachiitiko ichi.
Ehezve, Apple haina kumira poindi nepepa zivisa zvese nhau dzesisitimu yega yega yekushandisa, asi nekuda kwevagadziri avo vatove kunakidzwa nazvo, muchinyorwa chino tichaenda kukuratidza gumi nembiri maficha asina kutaurwa mukuburitswa kweIOS 11.
1 Chii chitsva muIOS 11
1.1 Imwe-ruoko khibhodi
1.2 Screen kurekodha
1.3 Muverengi weNFC
1.4 Yakagadzirwazve Podcast App
1.5 Dzivisa kubiridzira kuburikidza neSMS
1.6 3D Kubata muSafari
1.7 QR kodhi rutsigiro
1.8 Tsvaga muApp News
1.9 Nhaurirano kumakambani
1.10 Zoom muMapu neruoko rumwe
1.11 Nyorera Siri
Iyo nyowani Apple keyboard inotibvumidza isu kutungamira iyo keyboard kune imwe yezvikamu zvechidzitiro kuti tikwanise nyora zvakanaka neruoko rumwe. Ichi chimiro chakanakira kunyanya kune vashandisi veiyo iPhone Plus modhi.
Rinopfuura rinopfuura gore rapfuura, Apple yakabvisa iyo chete application yaibvumidza rekodhi iPhone skrini pasina kushandisa komputa. Iye zvino tava kunzwisisa chikonzero, uye chaive chimwe kunze kwekukwanisa kuita sarudzo iyi natively yakananga kubva kuControl Center, sarudzo yatinofanira kumisikidza kuti ioneke, nekuti nekutadza hakuonekwe.
Pakupedzisira Apple inoita kunge inoda vhura iyo NFC chip kune yechitatu-bato vagadziri, kupfuura muganho uyo waakapa kubva payakatanga kuitiswa uye ichikubvumidza iwe kuti uishandise sezvaunogona kwemakore akati wandei paApple.
Yakagadzirwazve Podcast App
Iko kunyorera kwekuteerera edu epamoyo maPodcast kwave nekugadziriswa kukuru kunotiratidza yakafanana chaizvo mushandisi interface iyo yatinogona kuwana parizvino paApple Music.
Dzivisa kubiridzira kuburikidza neSMS
Kuchengetedza kwagara kuri chikamu chakakosha kwazvo kuApple uye kuve nechokwadi chekuti vashandisi veIfree havatambure nedambudziko rakadai, iOS 11 inowedzera kuwedzera kutsva kuti zvidzivirirwe. achashanda mumumvuri.
3D Kubata muSafari
3D Kubata tekinoroji inotibvumidza famba nenzira iri nyore kuburikidza nezvatinoda zvakachengetwa muSafari.
QR kodhi rutsigiro
Zvirinani kunonoka pane kusati kwamboitika. iOS 11 pakupedzisira inowedzera native rutsigiro rwe QR kodhiIzvo izvo zvinotaurwa nemunhu wese kuti hapana anoshandisa asi zviripo kwese kwese.
Tsvaga muApp News
Kana iwe usiri kuda kutarisa kune dzese nhau idzo Nhau dzinotiratidza, tinogona kushandisa iyo injini yekutsvaga yakabatanidzwa mukushandisa.
Apple inoda kuti mabhizinesi atange kushandisa ayo mameseji masevhisi ku kutaurirana nevatengi, kumberi kweWhatsApp nemamwe mapuratifomu anga achizivisa kubatana uku kwenguva yakati.
Zoom muMapu neruoko rumwe
Mepu yekushandisa inogamuchira chiitiko chitsva chinotibvumidza isu kuti tiite kushandiswa kwekushandisa neruoko rumwe.
Kuneta naSiri kusakunzwisisa iwe? Uine iOS 11 unogona nyora wakananga kuna Siri Chii chaunoda kuti ndiite kana kutsvaga? Ichi chimiro chakanakira kune avo vane chinetso chekutaura kana avo Siri asingatombo nzwisisa pese pavanotaura.
Idzi ndedzimwe chete dzenhau idzo Apple isina kutaura mune yakakosha, asi zvirokwazvo havazi vekupedzisira uye mune inotevera kiyi, mune iyo iPhone 8 ichaunzwa, Apple ichatiratidza dzimwe nhau dzakasiirwa Chinangwa mumugodhi weinki, nekuti ivo vangangove vanowanikwa chete pane ramangwana Apple iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » 11 matsva maficha eIOS 11 ayo Apple asina kutaura nezvaKeynote
Ndosaka vasina kuziviswa. Ivo vairatidza zvinhu zvakawanda, uye mumaonero angu iyi yanga iri yekukurumidza Keynote kwemakore. Handisi kuzvitaura nekuda kwenguva, iyo kwandiri yanga yakanyanyisa, asi nekuda kwekumhanya kwaive nevamwe pavaitaura. Zvinotaridza kuti vakaona kuti havazove nenguva yekuburitsa zvese uye nekuda kweizvi vanodzora pamabasa seaya.
Kufunga nezvekuisa iOS 11? Pamwe zviri nani kumirira
iOS 11 inokutendera kuti utore QR kodhi uchishandisa iyo iPhone kamera